Ugujwa kanjani uKhisimusi emazweni ahlukene? 5 amasiko angajwayelekile - Indlela yokuphila 2022
Ugujwa kanjani uKhisimusi emazweni ahlukene? 5 amasiko angajwayelekile
Ukushibilika nge-roller ukuya esontweni
Hlobisa indlu yakho ngomfanekiso womuntu opopayo
Zigcine ufudumele ngemonitha
Faka isithelo esikhundleni somuthi
Umndeni ngamunye unesiko lawo likaKhisimusi elincane. Futhi uma ucabanga ukuthi wena nezihlobo zakho niyinqaba, bhekani ukuthi abantu benzani ngoKhisimusi emazweni ahlukene omhlaba …
Ngisho nabantu abangakholwa kakhulu bangaya esontweni okungenani kanye ngonyaka ukuze bazinikeze umoya wemikhosi - ngoKhisimusi. Nokho, kwakuseVenezuela kuphela lapho kwakukhona khona isiko elingavamile lokuya esontweni ngezikedi ezinamasondo. Emjahweni omkhulu we-rollerblading, iziphathimandla zize zavala nokuhamba kwezimoto emadolobheni.
EJapane, akuyona inkambiso kakhulu ukugubha uKhisimusi - kukhona amaKristu ambalwa lapho. Kodwa-ke, ngeminyaka yawo-1970, i-KFC yethula umkhankaso wokukhangisa osebenza kahle kakhulu wamaJapani, ngenxa yalokho izwe lakha isiko lokuya ngobuningi ngoKhisimusi ukuyothenga ibhakede lamaphiko ezinkukhu egatsheni eliseduze loxhaxha lokudla okuphekiwe oludumile.
Ngokuvamile kusetshenziswa imifanekiso yezingelosi, abelusi kanye nomntwana onguJesu esigcawini sokuzalwa kukaJesu. Kodwa-ke, eCatalonia, kuyisiko futhi ukubeka isibalo esincane somuntu ophahleni ekhoneni. Umfanekiso onjalo ubizwa ngokuthi "Kaganer" - amaCatalan akholelwa ukuthi kuletha injabulo.
Abantu baseNew York banezinketho ezimbalwa zokwenza amabhlogo abo efulethini afane noKhisimusi ngempela. Ngakho-ke, abantu benza okusemandleni abo: isibonelo, kusukela ngo-1966 eNew York, kuye kwaba nesiko lokushintsha indawo yomlilo yangempela ngevidiyo kumqapha we-TV.
E-India, cishe ama-2, 3% amaKristu - ngenani elincane kangaka lalabo abafisa, yebo, akekho ozoletha izihlahla ze-spruce ne-pine ezivela emazweni asenyakatho, futhi akukho phuzu: izinaliti zizofafaza ngokushesha.. Kodwa eNdiya kunenqwaba yobhanana nomango - yilokho amaKristu akhona azenza izihlahla zikaKhisimusi.